ဘားအံပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသ, Education College, Hpa-an (2021)
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ဘားအံပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသ, Education College, Hpa-an.
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှစလို့ လက်ခံပါမယ်
Credit to photo #Thazinkyaw
DTEd ၂၁/၁၆ ဒုတိယနှစ်တို့၏
တတိယဆု အလောင်းဘုရားအသင်း တို့က အသီးသီး
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၃ နှင့် ၁၄ ရက်နေ့များတွင်
ဘားအံပညာရေးကောလိပ် အမှတ်စဉ် ၂၁ နှင့် ၂၂တို့အတွက် သင်ပြနည်းဘာသာရပ်များ၏
ယနေ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့
နေရာတော်တော်များများမှာ ရေတွေကြီးနေတဲ့အတွက် သတိလေးနဲ့ ပြန်လာကြပါလို့ 🙏🙏
အသံပိုင်းအားနည်းမှုကို သည်းခံတော်မူကြပါ 😁
ကျောင်းတွင်း သင်္ကြန် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အခမ်းအနား
မုန့်လုံးရေပေါ်တွေ စားမလား 😂
မနက်ဖြန် ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
ဤpageသည် ဘားအံပညာရေးကောလိပ်၏ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ page ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းအတွက် လိုအပ်သော ဖြစ်သင့်သော အကျိုးရှိသော ၊ ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ဘားအံပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုနိုင်ပါသည်။
Be the first to know and let us send you an email when ဘားအံပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်မှု အသံပိုင်းအားနည်းမှုကို သည်းခံတော်မူကြပါ 😁
Study House English Language Classes
No 9/207, Mingalar Street, Near Langwa Bazaar, Hpa-an, Karen State
Hpa-An Computer University
Other Hpa-an universities
Want your university to be the top-listed University in Hpa-an?
Hpa-an University Students' Union
23/18 ​တွေရဲ့ flasher welcome ဘယ်​​နေ့လဲ 😁 တက်​ကြွ​နေပြီ 😌
We will notify you when anything happens in Hpa-an.